Doro tanety RN4 – Malag@sy Miray
Dia gaga aho nandre ny Solombavambahoakan’i KIANGARA tao amin’ny vaovaon’ny RNM ny 07 Janoary 2008 antoandro teo. Tsy menatra mihitsy ilay zalahy nilaza fa ny mpandeha fiara mandalo amin’iny làlana RN4 iny, hono, no mandoro ny tanety ka manjary tsy ahitan’ny biby fiompiny hanina. Nefa dia ny masoko mihitsy no nahita fa olona eny amin’io faritra io ihany no minia mandoro ny tanety fa hoe amin’izay, hono, dia tsara kokoa ny ahitra vao mitsiry aorian’io fandoroana ataony io. Dia mitondra rantsan-kazo toy ny kininina ry zareo, hamindramindrany ny lelafo. Dia sola tokoa anie izany ilay tanety e! Mampalahelo raha hifanipy hadisoana toy izany foana no hatao eto amin’ity firenena ity fa tsy hitady izay vahaolana maika eny ifotony eny. Olona efa ho telopolo mahery izahay no nanatri-maso sy tezitra nahita iny tanety lava iny mirehitra sy midonaka eraky ny làlana nolalovana. Mbola hasiako sary ity lahatsoratra ity amin’ny manaraka fa tsy nampoiziko hahita connexion aho androany.
12 janvier 2008 à 19:14
samy manana ny marina ianareo.
Olana lehibe mipetraka ao amin’ny tanitsika ity DOROTANETY ity. Ary efa ela no nisy izy io !
Aoka isika tsy tonga dia ho tezitra na alahelo !
Marina ny voalazanao fa MISY tompon’omby mandoro FARITRA amin’ny tanety mba hazahoana ahitra maintso ho an’ny omby. Ny mampalahelo anefa dia MATETIKA TSY VOAFEFY NY AFO koa dia LASA MANENIKA NY TANETY MANONTOLO !
Anjaran’ny fokotany sy ny tompon’andraikitry ny service des eaux et forêts, agriculture no MANETSIKETSIKA, MANAO FANAZAVANA, MAMPIANATRA NY MAHARATSY NY DOROTANETY sy ny ILAINA MAMBOLY HAZO.
Nihaina ny fahazazako rehetra tao anaty ny dorotanety aho (Ihosy, Isalo, Tampoketsa, moyen-ouest Miarinarivo, Tsiroanomandidy) ary nanao MAITRISE (1977) sy DOCTORAT (1983) MOMBA NY LAVAKA eran’ny MADAGASIKARA. Koa mamelà ahy hilaza fa MARINA io voalazan’ny tompon’andraikitra io, ary MISY TOKOA OLONA MANDORO tanety, olona MPANDALO. Ao ny mpifoka sigara, manipy sigara sns…!
Ny loza anefa dia misy fiara maro may ary misy olona miara may ao koa (ndeha jereo fa mbola misy kirotam-by ambin’ireny fiara ireny any amin’ny làlana Antananarivo-Miarinarivo) !
Nisy fotoana toa lasa fahazarana ny mitomany olona may lasan’ny dorotanety miaraka amin’ny fiara taxi-brousse !
Misy zavatra tsara ho fantatra dia ny fisian’ny AFO AVY AMIN’NY VARATRA LATSAKA ary matetika ny tany ngazana midadasika sy manerinerina toa ny any an-Tampoketsa no mahatonga an’io. Koa aza gaga raha tsy tapaka ny afotanety any amitsika !
Mamboly hazo tsy mijanona.
Tandremo: Tsy hazo kininina be, tsy pins, tsy mimosas toy ny atao any amintsika no TSARA SY SAHAZA AMIN’NY TANY ANY MADAGASIKARA satria
– Ny KINININA BE dia mifoko manamaina ny toerana rehetra manodidina (5km de diamètre) sy any ambany lalina be (10m de profondeur). Ny any Afrika Atsimo ohatra dia nanomboka manao CAMPAGNE ARRACHAGE D’EUCALYPTUS tamin’ny 2000 !
– Ny PINS indray dia manimba ny tany manodidina hitsiriny satria ny ravina (aiguilles) mihitsana dia manimba tany tsy azo ambolena intsony (acide)
– Ny MIMOSAS any amintsika dia karazany mifandraingotra be ny fakany rehetra koa lasa SEMPOTRA NY TANY MISY AZY ary lasa tsy misy toerana hanirin-javatra intsony !